Ntọala nke Kemitism - Afrikhepri Fondation
Ntọala nke Kemitism
Na-agụ: 9 mins
Qọ chọrọ ịghọta akụkọ ihe mere eme nke ndị Kemites, na ohere na oge, ga-amata otu esi agụ na oke nke Chineke Ausar. Ma otu bụ enyo nke ọzọ, nke ọzọ bụ oyiyi nke otu. N'ezie, ndị anyị, dị ka nna nna ha dị ebube Ausar (Osiris), nwetara mbibi nkewa / nkewa, mgbasa / ịchụpụ, na-achịkọta na n'ikpeazụ ịlọ ụwa nke ndị otu ya. Dika ihe egburu Ausar, gbue oge 72 (8 * 9) ndi nyocha ihe ojoo, ya mere site n'eziokwu nke ogdoade (demonic) (8) na ennead (9), ndi anyi e dinara n'ike, kewaa ya wee tuo ya na nkuku anọ nke ụwa site n'aka ndị mmụọ ọjọọ!
Ihe ndị a ekwuru na mbụ kwere ka Ausar laghachiri, wee megheere anyị ụzọ nke Amenti (Ndụ Mbilite n'Ọdịnihu). N'otu aka ahụ, nchụpụ nke ndị mmụọ ọjọọ ndị mmụọ a kwekọrọ n'ụzọ zuru oke na atụmatụ Chineke, onye chọrọ ka okwu Ya, okike, mmeri wee bụrụ (ebe) onye ọbụla na-enyo enyo na ọnụnọ ya. Onye Kachasị atụmatụ (Chineke), ebuola ụzọ hụ, n’ezie, na agbanyeghị mwepụ, mgbasa, mgbasa, ịchụpụ, ọtụtụ narị afọ nke ndị anyị na-awagharị, ebe ọ bụla anyị nọ, anyị na-akwagide ịlọ ụwa mmụọ. Na nke a, ma anyị bụ ndị Juu (falachas), Ndị Kraịst, ndị Alakụba ma ọ bụ ọbụna Rastas! N'ihi na achọtara nnabata Aton (re), n'ezie n'ụdị nke kewara ekewa, n'okpukpe ndị a niile a na - akpọ "ekpughere"!
Karịa di na nwunye Adama-Awa (Adam-Eve), ọ bụ onye na-adọrọ adọrọ nke Ibrahim / Abraham, onye n'ime ha niile, yiri ka ọ bụ onye a ma ama n'okpukpe a na-akpọ "ekpughere". Ugbu a anyị maara, Akwụkwọ Nsọ na kor'an na-agba akaebe ma na-akwado ya, na ndị Ibrahim / Abraham bụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. Ibrahim sitere na Kaldea ekweghi ekwe. Ma ọ bụ naanị na ala Kemite, karịa nke ọma na Kénanou (Kenean, Palestine ugbu a, ala nke Ausar mepere anya), mgbe Melkisedek (onye ya na ya na ha jikọrọ aka) malitere ịmalite okpukpe nke Eziokwu. 'ya (Ibrahim / Abraham) nyefere Chineke n'ezie ma bụrụ nke a na-apụghị ịgbagha agbagha na n'ime usoro ahụ hapụ ikpere arụsị nke ndị nna nna ya. Ọ bụ na Kemite ala, mgbe ọ natachara mkpughe Atonian, na ọ kpọrọ ahaIB-Ra-IMnke pụtara, na medou neter (asụsụ fononic) Chineke nọ n'obi ya.
Akwụkwọ nsọ mere ya otu n'ime ndị nna ochie kachasị mkpa, kor'an na-eme ya hanif (nke dị ọcha), onye nọ n'okpuru Chineke.
Onye obula nke kwere n’ozi nke Moses, Jisos, Muhammad, aghagh ikwere na okwukwe nke Ib-Ra-Im, okwukwe nke ndi Atonia. Ndị amụma niile nke okpukpe ndị a na-akpọ “ekpughere” na-agba akaebe nye ya, ya onwe ya na-agbakwa ama n'otu oge okwukwe na Atona na ịkpọasị nke ikpere arụsị nke ndị ọgbọ ya.
Ọ lụrụ onye Kemite, bụ onye Bible kpọrọ Agar / Adjara, Aa-ka-Ra, nke putara na Medu neter "Onye uku bu ka nke Chukwu, Onye uku bu ike okike nke Chukwu". Nwa-nwoke nye ya nwa nwoke: Ismael (Ma-El, nke pụtara, n'eziokwu Chineke bụ onye ezi omume). Akwụkwọ Nsọ na-ekpughe na ya (Ishmael) lụkwara onye Kemite (Jenesis 21:21). Nne Kemite, nwanyị Kemite, ụmụ Kemite, Ismael bụ, dị ka ọdịnala Koranic n'onwe ya si dị, nna nna nke ndị bi n'ọzara Araba (nke bụ Arabia ugbu a) na onye edemede, ya na nna ya, nke Saclọ Dị Nsọ nke 'Araba nke di na Mecca: Ka'aba (Ka-Ba bu ike nke Chineke nke mmadu puru ime ka nkpuru obi ya na mmuo di nma).
Moussa, Méssou (obere okwu nke Méssou-Atona, nke pụtara Onye Chineke mụrụ), dị ka Akwụkwọ Nsọ n'onwe ya si kwuo, Kemite (Ọpụpụ 2, 19) lụrụ nwanyị Kemite (Nọmba 12, 1), bidoro, zụrụ azụ, gụrụ akwụkwọ na ọdịbendị, yabụ okwukwe, Kemite (Ọrụ Ndịozi 7, 22). Ọ bụ ya bụ onye lekọtara iwu iri. Iwu, na Medou neter (asụsụ Moses), kwuru "oudja". Ọlaedo oudja bụ ma iwu ma okwu ahụ. Nke irioudja nke Moses abụghị ihe ọzọ karịa okwu iri nke okwukwe Aton, nke gụrụ dị ka ndị a: Atona Ankh Neter Pa Wa Nan Ky Hury Tep Ef. Gịnị ka a pụrụ ịsụgharị dị ka " Atona-Ankh, Otu Chukwu, ọ dịghị onye dị n’elu Ya". Ọ bụ nnabata nke ụkpụrụ a mere ka Mosis mebie akụkụ nke ndị ya nke na-etinye aka na ikpere arụsị, na mkpakọrịta (ya na Chineke) nke bụ ofufe nke Nwa Ehi Ọlaedo. Ọ bụ na aha ndị a 10 oudja na ọ katọrọ akụkụ nke ndị a nwere obi ọjọọ, rụrụ arụ, impious, ekweghị ekwe. Ma ọ bụ ndị a 10 oudja na kor'an na-ekwupụta dị ka ọrụ okwukwe, mgbe ọ na-ekwu na "ọ dịghị Chineke ma ọ bụghị Chineke, Naanị ya na enweghị mkpakọrịta". Anyị nwere ike ịhụ na Koranic shahada na-ezighi ezi na-ezo aka na ọrụ okwukwe nke Aton, nke Moses kwupụtara, ya mere nke Ausar kuziri.
Ma onye obula nke kwere na nkpughe nke Muhammad kwenyere na nke Jisos, ya mere na nke Moses, ya mere na nke Ibrahim, ya mere na nke Ausar, ya mere na nke ndi Atonian.
Uma nke Jisos siri “christ”, nke putara na Greek “christos” (Onye E Tere Mmanụ, Onye A Họpụtara [Chineke], Mezaịa), na-ezo aka na nke Ausar. N'ezie, Ausar, onye isi nke Shabazz ebo, onye mepere emepe nke ụwa, kpọrọ Setep En Atona, nke putara "Onye Chineke ahoputara" (ma ọ bụ Mezaịa ahụ), a na-akpọkwa ya Isha, Annunciator nke Medu Nefer. Mana "Isha" bu aha mbu Kemite nke sitere na ngwaa nwoke nke pụtara ịkwusa, ịdọ aka ná ntị; na medu nefer ka ọ dị ugbu a pụtara "ozi ọma" (n'asụsụ Greek evangelia, ozioma).
Ausar dị n'isi nke Tribe nke Shabazz hapụrụ ihe Ndị Ochie anyị kpọrọ Ta Neter (ala nke Chukwu) na oge ochie Greco-Latin kpọrọ Ethiopia (ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya na Etiopia nke oge a), iji weta " ozi oma ”(ozioma) nye ndi mmadu ndi ozo, ka ha mepee anya ụwa na nke ndị ozi iri na abụọ, ndị na-eso ụzọ 12, ndịozi 12 kwadoro. Egburu ya ma degharịa ya mgbe ọ rịdasịrị na Duat (the Underworld). A mụrụ ya ụbọchị ise tupu ngwụcha afọ wee rụọ ọtụtụ ọrụ ebube. E buliri nne ya, Nut, onye Chineke hụrụ n'anya (Mery / Maria Atona) gaa n'eluigwe.
Jesus / Isha / Issa bụ isi Kemite, nke na-akọwa mgbapụ nke ndị mụrụ ya na Kemet (Egypt nke oge a), ala nna nna ha. Ọtụtụ ụlọ arụsị, ụka, alakụba nke Kemet (Egypt ugbu a) na-edebe ụzọ nke ezinụlọ Isha / Issa / Jesus na Kemet (Egypt ugbu a).
Karịa mimicry, agwa Isha / Issa / Jesus bụ ntụgharị nke Ausar.
Onye ọ bụla nke kwere na "medu nefer" (ozi ọma, ozioma) nke Isha / Issa / Jizọs kwenyere, n'eziokwu, naanị nke Ausar, n'ihi na Issa = Ausar.
Dika anyi matara "muhammad" putara (n'asusu Arabic) "onye toro otuto". Nke a bụ aha enyere Ausar, n'etiti ndị ọzọ. Ausar, dị ka fara Akhenatona, aha ya bụ "Nahasy" nke pụtara "otuto". Nke a bụ otu n'ime njirimara nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị sitere na Ta Neter, nke gosipụtara akara miri emi ndị Gris oge ochie. Ọtụtụ n'ime ha gbara akaebe n'eziokwu a, na-ekwu maka ndị ha kpọrọ "ndị Etiopia" na ha kachasị nwee ntụkwasị obi n'ụwa, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị kacha nwee nsọpụrụ n'ụwa. E gosipụtara nke a nke ọma n'ihe odide nke Homer, Herodotus na ọtụtụ ndị edemede oge ochie gụnyere Diodorus nke Sicily. Onye amụma nke mkpughe nke Quran ketara aha na-ezo aka n'ọdịnala Kemite ogologo. A na-aghọta nke a n'ụzọ dị mfe, mgbe anyị maara na usoro ọmụmụ nke onye amụma Muhammad na-ezo aka Ishmael. Agbanyeghị, anyị egosila na nke ikpeazụ bụ nke zuru oke, site na nne ya, nwunye ya, ebe amụrụ ya, aha ya, asụsụ ya, wdg, na ọdịbendị ndị Kemite. Ọ bụ ọdịbendị Kemite a, okwukwe Kemite a nke na-alaghachi n'ala dị egwu (ọzara Arabian) site na mkpughe Koranic. Mkpughe nke a ka akara akàrà nke okwukwe ndị Aton; ya mere bu ndi ozo edeputara banyere nrube isi Kemite na kor'an.
Ewezuga Ibrahim / Abraham, Moses / Moussa, Issa / Jesus na Ismael ndị ọzọ, anyị nwere ike ịgụta Idriss (sura 19 amaokwu 56 ruo 57) na Loqu'man (sura 31).
Idriss bụ onye anyị na-akpọ Djéhouty (Thot) na onye Greco-Latin na-akpọ Hamis. Djéhouty, onye Chineke hụrụ n'anya, onye Chineke kpughere ede, sayensị, mgbakọ na mwepụ, usoro. Onye na-edekọ, n'oge ikpe ikpe ikpeazụ, na Ogige Ausar na ụlọ nzukọ nke Maats abụọ ahụ, mmehie na ezi ọrụ nke ndị nwụrụ anwụ. Kemite a na kor'an kpọrọ Idriss, bụ Kemite nke ọkwa dị elu nke onye ọ bụla Alakụba ji nkwanye ugwu, ịhụnanya na nchebara echiche dị ka Chineke si hụ ya n'anya.
Loqu'man, nke Greco-Latin mara nke ọma n'okpuru aha Aesop, bụ Kemite a bụ onye sitere na akụkọ ifo ndị La Fontaine sụgharịrị na French. Oké amamihe ya na ịhụnanya ya na-adịghị agbanwe agbanwe nke Chineke mere ka mkpughe nke Koran tinye ya dum sura (sura 31 nke na-aza aha ya) iji duzie ndị Alakụba na ụmụ nwanyị Alakụba n'okpukpe nke Eziokwu, nke ido onwe ha n'okpuru Atona kpamkpam.
Abụọ Aesop (Loqu'man) na Djéhouty (Idriss), ha abụọ nyefere Atona. Ha abụọ na-ekpe okpukpe nke Eziokwu, nke Ausar kuziri ụwa niile. Ma ọ bụ okpukpe a nke Eziokwu, nke Ezi Omume (ofufe nke Atona) nke onye amụma Muhammad gbara akaebe. E wezụga nke ahụ, a na-akpọ kor'an al-Dikhr, nke pụtara Cheta. Enweghị ike icheta na-enweghị mkpesa. Mana arịrịọ a ka ebugharịrị karịa ndị Kemites, nwoke na nwanyị mbụ na ụwa a. Gịnị na-egosi n'ike The Holy Qur'an na sura ya 15 amaokwu nke 26 na nke 28, ebe ekwuru ya hoo haa: “N’ezie, anyi kere anyi mmadu site na ụrọ na-ada ụda, site na mbat ụrọ ojii. (…) Mgbe Onye-nwe-gi gwara ndi mo-ozi: Mgaje ike dika nkpuru-aru di nkpuru-obi aru. "
Onye isi ala ya Hailie Selassie bu ihe kariri Onye kwesiri ekwuputa Marcus Garvey, onye isi nke Rastafarianism. Holy Piby nke Rastafarianism na-ezo aka Kemet site na omume nke Emperor Haile Selassie n'onwe ya, n'ihi na nke ikpeazụ a na-ekwu, n'ezie, nke eze nwanyị nke Sheba, ma ọbụna karịa nke Ori, eze oge ochie nke Ethiopia (Ta Neter, ka a ghara ịghọtahie ya na Etiopia nke oge a). Ugbu a Eze Ori, onye Negus Hailie Selassie na-azọrọ na ọ bụ onye sitere na ya, abụghị onye ọzọ karịa Ausar, onye isi nke Tribe nke Shabazz, Eze nke Ta Neter nke Etiopia, Ntọala na Atona. Ọ bụ na Ausar ka Negus Hailie Selassie nwere ikike ime mmụọ, akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ya mere, ọ bụụrụ Ausar ka Rastafarianism sitere na nkà mmụta okpukpe ya niile, nkuzi ya, ịma mma ya, isi ya.
Dịka anyị nwere ike ịhụ, okpukpe ndị a niile a na-akpọ "ekpughere" nke ejiri "kee anyị agbụ" na-ezo aka na Ausar, ya mere, òtù nzuzo Aton. Ọ bụrụ na anyị ewepụta ihe niile dị iche iche, itinye uche naanị na nkuzi nke etiti n'okpukpe ndị a a na-akpọ "ekpughere", naanị Atonian nucleus na-egosi, nke ejiri omume Ma'at mara, Nrube isi zuru oke na uche. chukwu, ikpe ikpe ikpe nke ọgbakọ ikpe Ausar, mbilite n'ọnwụ ime mmụọ, etiti nke ụdị Ausar, wdg. Onye ojii ọ bụla ji obi ya niile mara okwukwe Mosaic bụ Kemite, nwa ojii ọ bụla bụ n'ezie onye na-eso ụzọ Jizọs bụ Kemite, nwa ojii ọ bụla bụ isi Alakụba bụ Kemite, ezigbo ezigbo Rasta bụ Kemite. N'ihi na isi ihe dị n'okpukpe ndị a a na-akpọ "ekpughere" sitere na ofufe Aton, nke bụ ofufe mbụ nke ihe niile si na ya. Laghachi na isi mmalite nke okpukpe ndị Juu nke Moses, nke Iso Christianityzọ Kraịst nke Jizọs, nke Islam nke Muhammad, nke Rastafarianism nke Hailé Selassie, bụ ibuli okwukwe Atonia elu, iji gosipụta ihe ngosi nke Aton, ime ihe nkuzi nke Ausar, iji bulie ya elu. ya Kemite nsụhọ. Nke a bụ ebe achọtara imach, ihe kachasị mkpa Kemitism.
Abụ m Martin Luther King - Akwụkwọ (2018)
Kwado Afrikhepri - Nye onyinye